taariikhda hogaamiye Imaam-Axmed Axmed Gurey oo kamid ahaa culimadii suufiyada iyo difacii dalka somaliya | Ashaacira's Blog
← taariikhda nololeedkii Shiikh Mansuur
taariikhda sheekh Jamaalu-Diin →
taariikhda hogaamiye Imaam-Axmed Axmed Gurey oo kamid ahaa culimadii suufiyada iyo difacii dalka somaliya
Imaam-Axmed Axmed Gurey
Arrintani sida ay ka dheregsan yihiin dadka aqoonta u leh taariikhda Imaam Axmad Ibraahim oo loo yaqaan Axmad Gureey wuxuu ahaa Imaam Suufi ah oo ka mid ah culamada Ahlu sunna Wal-jamaaca ee Soomaaliyeed.
Imaam Axmad Gurey waxaa kitaabbadii Imaamnimadiisii diinta iyo karaamaatkiisii wax ka qoray ka mid ahaa kitaabka Alnuuru-saafir can akhbaaril qarnil caashir oo uu qoray Al-Imaam Shamsu-shumuuus Muxyaddiin Cabdulqaadir ibnu Sheekh Cabdillaahi Al-caydaruusi. Kitaabkani wuxuu ka mid yahay kutubta ugu muhiimsan ee wax ka qortay dhacdooyinka qarnigii 10-aad ee Hijriyada.
Kitaabku markuu ka faalloonayey Imaam Axmad Gurey wuxuu ku soo qaatay bogga 198, dhacdadii sanaddii 934-dii Hijriyada. Wuxuu sheegay in Imaam Axmad ka mid yahay Awlaaddii Sheekh Sacdu-diin, magaciisa iyo guulihiisuna ay soo weynaanayeen ilaa uu gaarey heer aan laga sheekayn Karin. Wuxuu furtay Imaam Axmed ayuu yiri Kitaabku magaalooyin badan oo ka mid ah magaalooyinka Xabashida, gaaladiina wuu ka adkaaday. Wuxuu joogteeyey jihaadkii iyo duullimaadkii lagu kor yeelayey Ilaahay (SW) diintiisa.
Waxaa laga soo weriyey jihaadyadiisa ayuu yiri Imaamku wax caqliga ka fajaciya. Qaar ka mid ah culammadii iyo taariikhyahannadii waqtigaas waxay yiraahdeen, ma jiraan futuuxaad ama furashooyin u ekaa oo la mid ahaa futuuxaadkii Imaam Axmed Gurey oo aan ka ahayn futuuxaadkii Asaxaabta. Sidoo kale, waxaa la weriyey ayuu yiri “in geesinnimadii Imaam Axmad Gurey ahayd mid caqliga ka weyn”. Dhammaan jihaadkiisa, akhlaaqdiisa iyo maamulkiisu waxay ku dhisnaayeen Shariicada Islaamka. Wuxuu Qaniimooyinka jihaadka laga helo khumuskeeda siin jirey qaraabada Rasuulka (CSWS).
Qaar Saalixiinta ka mid ah waxay iyana arkeen ayuu yiri, qudbigii waynaa ee weliga Ilaahay ahaa Al-qudbul- Caydaruus oo dhahaya: “ha ku magacaabinina suldaan ee ku magacaaba imaamkii muslimiinta”. Imaamka qoray kitaabkan Al-nuuru-saafir ee aanu halkaan ku soo xiganayno wuxuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyey: “isku soo duube, Imaam Axmad Gureey Allaha ka raalli noqdee, wuxuu ka mid yahay aayaatka Ilaahay”. Macnaha wuxuu ka mid yahay cajaa’ibta uu Rabbi (SW) ka muujiyey addoomankiisa xagga geesinnimada, karaamada, hoggaaminta, diin ku dhaqanka, samafalka iyo inta badan qaybaha wanaagga ee guud ahaan dhaqanka.
Sheekh Shahaabu-diin Ibnu Cabdil-qaadir kitaabkiisa Al-Futuuxul-Xabasha boggiisa 4-aad markuu Imaam Axmad Gurey ka faalloonayey waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:- Imaam Axmad Gureey waa mid ka mid ah Imaamyaalka dadka diinka ku hanuuniya, waana Amiirkii Muminiinta. Skiikh Shahaabu-diin wuxuu kaloo kitaabkiisa Fatuuxul Xabasha ku xusay in Imaamka uu ku magacaabay Al-caarif Billaah, Waliyu-llaah Shamsu-diin Cali ibnu Cumar al-Shaadali uu ku dheeraaday karaamaatka Imaam Axmed Gurey.
Sidoo kale, Skiikh Shahaabu-diin isla kitaabkiisa Futuuxul Xabasha wuxuu ku xusay in Imaamkii uu ku magacaabay Waliyullaahi Tacaalaa Wabnu Waliyihi Muxammad ibnu Axmad ibnu Muxammad ibnu Cabdul-waaxid ibnu Yuusuf Ibnu Yacquub al-Qurashi Al-Tuunusi al-Magribi uu yiri “ Imaam Axmad Gurey waa Seef ka mid ah Ilaahay seefihiisa, oo Ilaahay u istaajiyey inuu u gargaaro diinkiisa, gaaladana qahro.”
Sheekh Shahaabu-diin wuxuu isla kitaabkiisan Futuuxul-Xabasha bogga 14aad ku sheegay in sheekh Muxamammad bin Muxammad Al-Dahmaani uu yiri: “anigoo hurdaya ayaan habeen waxaan arkay laba nin oo ka mid ah Ilaahay Awliyadiisa. Mid wuxuu ahaa Sheekh Axmad ibnu Sheekh Muxammad ibnu Sheekh Cabdulwaaxid; kan labaadna wuxuu ahaa sheekhii waynaa ee caarifka Ilaahay ahaa Al-sayid Shariif Abuubakar Ibnu Shaykhil Kabiir Al-Shahiir Cabdullaahi Caydaruus. Labadaas weli waxay yiraahdeen ha ku magacaabinina Suldaan ee ku magacaaba (Axmed Gurey) Imaamul- Muslimiin”.
Sheekh Shahaabu-diin wuxuu kitaabkiisan Futuuxul-Xabasha ku qoray karaamaad badan oo Ilaahay ku karaameeyey weligiisa Imaam Axmad Gurey. Waxaa ka mid ahaa karaamaadkiisii uu xusay:- Shinnida oo dushiisa iyo hareerihiisa soconaysay sidii iyada oo waardiyeynaysa isla markaana aan wax yeellaynayn dadka la socda.
Waxaa ka mid ahaa karaamaatkii Cali ibnu saalax Al-jayli iyo Axmad ibnu Daahir ay ka weriyeen Sacad ibnu Yuusuf oo yiri: habeen habeennada ka mid ah anigoo hurdaya waxaan arkay Nabiga (CSWS) oo uu dhinaca midig ka joogo Abuubakar Al-saddiiq, dhinaca bidixna uu ka joogo Cumar ibnu khaddaab, hortiisana uu taagan yahay Cali ibnu Abii Daalib oo uu hortiisa ka soo jeedo Imaam Axmad ibnu Ibraahim; markaas ayaan iri Rasuulkii ilaaheeyow waa ayo ninka Cali ibnu Abii Daalib hortiisa taagan? Markaas ayuu Rasuulka (CSWS) yiri waa nin uu Ilaahay ku hagaajinayo magaalooyinka Xabasha.?
Imaam Axmad (Gurey) waqtigaas wuxuu ahaa nin ka mid ah ciidanka Muslimiinta. Ninka ru’yada arkay ma aanu aqoon Axmad Gurey. Si loo ogaado oo loo arko ninka ruyada lagu arkay ayaa marba mid la tusayey nimankii madaxda ahaa, iyadoo lagu oranayey kan miyaa qofkii aad ru’yada ku aragtay? isaguna ku jawaabayey maya, ilaa uu waqti danbe ka arkay Imaam Axmad Gureey markaas ayuu dadkii magaalada ku yiri “waakan ninkii aan ru’yada ku arkay oo uu Rasuulku (CSWS) ii sheegay inuu islaaxinayo magaalooyinka Xabasha.
Sheekh Shahaabu-diin wuxuu yiri ru’yadiisu run ayay noqotay, Imaam Axmad Gurayna wuu hantay magaalooyinkii Xabasha oo dhan wuuna hagaajiyey. Waxaa iyana jirta in kitaabka la yiraahdo Al-nuuru-saafir uu isna qorayo karaamadaas kor ku xusan.
Axmed Guray jihaadyadiisii ugu muhiimsanaa waxuu gaaladii gumaysatada ahayd ee Xabashida ku qaaday 1529-kii oo uu ku qabsaday meesha layiraado Shembere. Dagaalladiisa kuwii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa Jihaadyadii uu ku qabsaday Darwo, Shawa , Amhara, Ifa iyo guud ahaan magaalooyinkii gobolada dhexe ee halbowlaha u ahaa boqortooyadii Xabashada.
Intaa kadib, Imaam Axmad Gureey waxuu isla markiiba cagta mariyey magaaladii hooyada u ahayd Kaniisadaha ee Aksom (Axum). Waxay guulahaasi isdaba joog ahaayeen ilaa iyo intii ciidanka Imaamku ka gudbaan harada Taana oo ay ka gaaraan xadka dalka Suudaan; boqorkii Xabashiduna uu noqdo mid ku dhuumaalaysta Buuraha aaggaas.
Arintaasi waxay Kirishtadii reer Yurub ku qasabtay inay u soo hiilliyaan boqortooyadii Xabashida. Waxaa gurmadkii ugu horreeyey u fidiyay Boortaqiiska oo markaas ugu xoog roonaa dowladaha reer yurub. Ka dib, Boortaqiiska iyo Xabashida weerar wada jir ah ayey ku soo qaadeen Imaam Axmed Guray iyo ciidankiisii. Waxaa halkaas lagu laayey inta badan ciidankii boortaqiiska oo uu ku jiray hogaamiyihii ciidanka boortaqiiska Vosca Gagamma oo uu dhalay Kiristoofar Dagaama, badmareenkii gumaystada ee caanka ahaa. Imaam Axmed Guray Allaha ka raali noqdee dhaawac waqtigaas gaaray sababtii ayuu u dhintay sanadii 1543-dii